FARM - O - CLUB Ukubaleka okuzolileyo
Manewadi, Maharashtra, India
Ifama sinombuki zindwendwe onguDr. Sunita
UDr. Sunita unezimvo eziyi-22 zezinye iindawo.
Ifama-O-Iklabhu yindawo yokuhlala yasefama efanelekileyo kwiintsapho ezinkulu / amaqela atyelela i-Kolhapur ukuze abone indawo kunye netempile yaseMahalaxmi abafuna ukuchitha ixesha kunye. Ixesha losapho olusulungekileyo. Iqela lakho liya kuba nendawo yakho yonke. Zonke iihektare ezi-8. Bukela iintaka, jikeleza, Dlala iqakamba okanye eminye imidlalo, yiza nekaraoke yakho kwaye ucule ubusuku bonke, nokuba uvuthe. Isetingi yendlu ikude kwaye izolile, indawo yokusabela ezolileyo kwintlambo epholileyo kodwa iseyimizuzu ukusuka kukuphithizela kunye nokuphithizela.
Ibekwe kwindawo ephakathi kweekhilomitha ezili-10 ukusuka kwitempile yaseMahalaxmi, iikhilomitha ezili-10 ukusuka ePanhala kunye neekhilomitha ezili-10 ukusuka eJotiba. Amaqela anomdla anohambo oluya eJotiba kusasa.
Le ndlu inegumbi elinye lokulala elinendlu yangasese encamatheleyo, indawo enkulu yokuhlala enenye indlu yangasese kunye nekhitshi elisisiseko. Kukho idesika enkulu ngaphezulu kwendlu enemibono entle yeentaba. Kukho iGajebo enkulu ecaleni komlambo wamanzi kunye nomthombo. Ingaphandle iyamangalisa kwaye ikhanyiswe kakuhle ebusuku.
Izinja kunye nezinye izilwanyana zasekhaya zivumelekile.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-4, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2
Umbuki zindwendwe ngu- Dr. Sunita
Helpful and full of energy